Cumar Filish oo shaaca ka qaaday Sababta loo sugi la yahay Amniga Muqdisho | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Cumar Filish oo shaaca ka qaaday Sababta loo sugi la yahay Amniga...
Iyada oo Maalintii shalay ahayd uu Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi farmaajo uu saxiixay sharciga la-dadagaalanka musuq maasuqa ayaa Guddoomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa Caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud maxamed (Cumar Filish) waxaA uu sheegay in amni darada dalka kajirta ay qeyb katahay musuq maasuqa.
Waxa uu sheegay in musuq maasuqa uusan ahayn in lacag la qaato kaliya balse uu qaybo badan yahay taas ayuuna tilmaamay in ay qayb katahay hantida dowladda ee loogu tala galay in loogu adeego Shacabka oo lalunsado.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa intaasi kudaray guddoomiyaha in musuq maasuqa ay qayb ka tahay in qofka la handado,iyada oo awood loo sheeganaayo , isag oo tusaale u soo qaatay in ay Al–Shabaab ay dadka handadaan iyaga oo awood u sheeganaayo sida uu hadalka u dhigay.
Inta badan Shacabka Soomaaliyeed ayaa ku eedeynaya mas’uuliyiinta kala duwan ee dowladda u Shaqeya in ay kudhaqmaan musuq maasuq , sidoo kale Ciidamada kashaqeeya sugidda amniga ayaa lagu eedeeyaa in ay qaataan laaluush taas oo lafteeda qeyb ka ah Musuq maasuqa.
Previous articleDad lagu qab qabtay howlgal laga sameeyay Baladweyne
Next articleAkhriso: Dowladda oo amar hor leh kusoo rogtay Diyaaradaha u duulaya Kismaayo